အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ပဲခူးရေဘေးအတွင်းမှ အတောက်ပဆုံးပုံရိပ်
ရော့ ရော့ တကာမကြီး
နင်တို့အိမ်ထဲမလဲ ရေတွေ အားကြီးပါလား?
ဆိုကောင်းဆိုဖြစ်ကြပေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် …
ရေလွှမ်းမှုဟာ ဘာသာလူမျိုးမခွဲပဲ ဝင်ရောက်ခဲ့။
ရန်သူမျိုးငါးပါးဟာ ဘာသာလူမျိုးမခွဲပဲ ဝင်ရောက်ခဲ့။
ဗုဒ္ဓသာသနာကို အမုန်းစကားဖြင့် မပြုနိုင်။
မျက်စိကနေ နှလုံးသားထိ စီးဝင်တယ်။
ဒါ ငါတို့ သံဃာတွေပါလား။
ဒါ ငါတို့ ရတနာသုံးပါးပါလား။
ဒါ ငါတို့ ရှိခိုးဦးတင်ရာပါကလား။
အားကိုး မြတ်နိုး ယုံကြည်တဲ့စိတ်ဟာ
ပီတိနဲ့အတူ နှလုံးသားကို လွှမ်းခြုံတယ်။
ဘုရားရယ် တရားရယ် ပြီးတော့သံဃာရယ်
(ဓါတ်ပုံကို ကိုခင်မောင်ဝင်း- အေပီ ထံမှ ရရှိပါသည်)
Credit Thorn Nay Soe
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:23 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook